China Plansifter rụpụta na Factory | Obodo Chinatown
Atụmatụ FSFG bụ otu n'ime ngwaahịa anyị mepụtara na-adabere na echiche ndị ọhụrụ. Ọ nwere ike ịdị na-yọchaa ma na-eme ka ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe. Dị ka igwe eji ekpocha ntụ ọka, ọ dabara maka ndị na-emepụta ntụ ọka ndị na-edozi ọka wit, osikapa, ọka durum, rye, oat, ọka, buckwheat, were gabazie. Na omume, ụdị igwe a na-ejikarị eme ihe maka ịgha ọka na-egwe ọka na etiti ihe nzacha, maka ntụle ntụ ọka. Dị iche iche sieving aghụghọ ona dị iche iche sifting amaokwu na etiti ihe.
1. The sieve etiti size dị na 640 × 640mm na 740 × 740mm.
2. A na-eji efere efere efere na-eme atụmatụ ahụ, ebe a na-ebute mgbidi dị n'ime igwe anaghị agba nchara. A na-etinye counterweight na-agbanwe agbanwe na SKF (Sweden) pụrụ iche na-atụgharị ụdị agba abụọ.
3. A na-eme ka osisi sieve si na osisi dị na ya n'ime na n'èzí na-ekpuchi ya na lamination plastic. Ha nwere ike ịgbagha ma gbanwee. A na-eji okpokoro sieve na-acha akwụkwọ nchara nchara. Otu akụkụ nke ọ bụla jikọtara ya na ogwe osisi ígwè na nrụgide micrometric nke si n'elu. Ọ dị mfe na ngwa ngwa ịgbanwe ntụgharị siftif nke planifter mgbe ọ dị mkpa.
4. Igbapụta nke ntụ ọka a na-ehichapụ ntụ ọka na-abịa na mkpuchi mkpuchi ojii n'ime ike ndọda.
5. Anakwere SIFAR sieve.
6. Sivova NOVA dikwa maka Planifter. Ngwongwo nke ime n'ime aluminom nwere ike izute ihe ndi ozo di elu, ya na ebe ndi mmadu na-aru ya na ihe omumu sayensi nwere ike inye oke oru di omimi.
7. Ihe niile ejiri kpọtụrụ ihe ozugbo bụ nke igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị mma, na-eme ka ogo dị ọcha.
8. Atụmatụ anyị na-abịa na nhazi ụdị dị ka mkpa gị. Ọ dị na ngalaba akụkụ anọ, atụmatụ isii na nkebi asatọ, ka ị nwee ike ime ọtụtụ ohere dị ugbu a.
9. The ime mgbidi na ụzọ na-abịa na elu kwes mkpuchi ụzọ, na-ezere mmiri odide ikpe ka ukwuu.
(nkeji) Sieve Elu (mm) Sieve ụba Elu
(ọ dịghị n'elu sieve etiti)
(mm) Min Elu nke nwụnye
(kW) Rotary dayameta
(mm) Main aro Speed
(r / min) Mpaghara ebepu
(m2) Ibu ibu
FSFG6 × 24 6 2200 2300 1950 2050 3200 3300 4 7.5 47.5 Ogbe 65.5 3550 4550
FSFG8 × 24 8 2200 2300 1950 2050 3200 3300 7.5 11 Ogbe 63.4 87.4 4700 5300
The igwe na-anya site a moto nke arụnyere n'ime nke isi eku na counter-guzozie eguzozie site a counterweight. Igwe ọ bụla nwere ngalaba 4, ma ọ bụ 6, ma ọ bụ 8. Ihe dị iche iche na-asọba n'akụkụ dị iche iche na ụzọ nke ya. Dị ka onye imewe maka dị iche iche ihe, sieve sifts dị iche iche granular ihe dị iche iche ọzọ amaokwu na ntụ ọka mills mgbe dum igwe na-agba ọsọ.
Sieve etiti na nnyefe eku
Unique imewe maka mwekota nke isi etiti na partitions n'ime a ọkpụrụkpụ Ọdịdị, na ihe onwunwe adopts ala alloy ụgbọala baffle.
Sieve etiti kọlụm
sieve etiti kọlụm jiri obere alloy oyi extrusion enweghị nkebi udi ígwè anwụrụ, n'ịkpa mortise-tenon njikọ Ọdịdị n'etiti n'elu na ala efere.
Ogwe osisi sieve nke osisi, mkpuchi plastik, na-eyi uwe na-eguzogide, gbochie nrụrụ mmiri, akụkụ ndị a na-ekpuchi na ígwè maka ike siri ike, nha kwesịrị ekwesị, mgbanwe mgbanwe. Igwe mgbachi a na-ahụ anya na-adị mfe ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya, ịrụ ọrụ dị mma na etiti ahụ zere ntụ ntụ ntụ.
Sieve ndị na-ehicha ya na ndị na-ehicha tray
Sieve cleaners nwere ike igbochi sieve mgbochi, na ndị na-ehicha tray nwere ike ịkwanye ihe ahụ na-aga nke ọma.
Eriri iko ihe suspender.
Nke gara aga: Igwe Mbuli
Osote: Nhicha Plansifter